Home - Okwu Foundation • Ndị na-edepụta echiche na ntinye
Ndị na-edepụta NCHIKA NA NWA
Ugbu a ị dị njikere ịchọta ozi dị gị mkpa dị ka mmadụ-nke dị n'ime akwụkwọ ahụ Echiche na Mbibi site n'aka Harold W. Percival, otu n'ime ndị na-eche echiche kachasị elu nke 20th century. Na-ebipụta ihe karịrị afọ iri asaa, Echiche na Mbibi bụ otu n'ime mkpughe zuru oke na nke dị omimi e nyere ụmụ mmadụ.
Ebumnuche nke mkpokọta a bụ ime Echiche na Mbibi, yana akwụkwọ ndị ọzọ Maazị Percival, maka ndị ụwa. E nwere ike ịgụ akwụkwọ ndị a ugbu a ma nwee ike ịbanye na Ụlọ Akwụkwọ anyị. Ọ bụrụ na nke a bụ nyocha mbụ nke Echiche na Mbibi, ị nwere ike ịmalite site na Nkọwa Okwu Onye Ozizi na Okwu Mmalite.
Okwu mmalite nke onye edemede
Ihe akara geometric ejiri na saiti a na egosiputa usoro ihe omimi nke egosiputara ma kowa ya Echiche na Mbibi. Enwere ike ịchọta ozi gbasara akara ndị a Ebe a.
Ọ bụ ezie na akụkọ ihe mere eme egosila anyị na ụmụ mmadụ na-achọkarị inye nsọpụrụ na inye mmadụ otuto dị ogologo nke HW Percival, ya onwe ya kwenyesiri ike na ya achọghị ka akpọrọ ya dịka onye nkuzi. Ọ jụrụ na nkwupụta na Echiche na Mbibi ka eziokwu nke di nime onye obula kpee ikpe; ya mere, ọ na-eme ka onye na-agụ ya laghachi azụ:
Anaghị m atụ anya ime nkwusa nye onye ọ bụla; Anaghị m ewere onwe m onye nkwusa ma ọ bụ onye nkụzi. A sị na ọ bụghị na m nwere akwụkwọ maka akwụkwọ a, m ga-ahọrọ ka m ghara ịkpọ aha m dịka onye dere ya. Ịdị ukwuu nke isiokwu ndị m na-enye ozi, na-egbochi ma na-egbochi m onwe m ma na-egbochi arịrịọ nke obi umeala. Enwere m ike ikwu okwu dị iche iche na nke na-awụ akpata oyi n'ahụ na onye na-adịghị anwụ anwụ nke na-adịghị anwụ anwụ bụ nke dị n'ime ahụ mmadụ ọ bụla; ma ana m ejighị n'aka na onye ahụ ga-ekpebi ihe ọ ga-eme maọbụ na agaghị ejikọ ya na ozi ahụ.
- HW oge
Banyere HW Percival
Percival si Echiche na Mbibi kwesịrị ịkwụsị onye ọ bụla na-achọ ihe na-achọ ihe ọmụma ederede ederede banyere ndụ. Odee ede gosiputara na ya matara ebe okwuru. Enweghị asụsụ okpukpe na-edo edo na enweghị nkọwapụta. N'adịghị iche na ụdị a, Percival edewo ihe ọ maara, ọ makwaara nke ọma - karịa karịa onye edemede ọ bụla ọzọ amaara. Ọ bụrụ na ị na-eche banyere onye ị bụ, gịnị kpatara ị nọ ebe a, ọdịdị nke eluigwe na ala ma ọ bụ nzube nke ndụ mgbe ahụ Percival agaghị ahapụ gị ... Kwadebe!
Akwụkwọ Ndị Na-agụ Akwụkwọ Anyị